Microstation V8i, shuruudaha - Geofumadas
Maarso, 2009 Microstation-Bentley, aragti ugu horeysay
Waxaan horeyba u gaadhay qaybta cusub ee Microstation V8i, waxaan haystaa waqtigaan sababtoo ah waxaan weydiistay qalab loogu talagalay Architecture, Engineering and Geospatial. Si aad u codsatid Xaansho, waxa lagu sameeyaa Bentley downloads bogga Iyadoo la adeegsanaayo xisaabta user, barnaamijyada ayaa la doortaa oo loo diraa gurigaaga adiga oo adeegsanaya UPS.
Shuruudaha iyo rakibidda
Shuruudaha waa in lagu dhajiyaa marka hore, taas oo ah 283 MB oo la fulin karo oo ka kooban:
Windows Installer Version 3.1v2, sida caadiga ah haddii aad haysato XP waa in uusan dhibaato jirin.
Microsoft .NET Qaabdhismeedka 3.5
Xaqiijiye XML Xaqiijiye (MSXML) 6, 1 Service Pack for 32
MSXML waxay sidoo kale ku imaaneysaa 64 haddii ay khuseyso
Muuqaalka Microsoft ee aasaasiga ah ee Codsiyada
Muuqaalka Aasaasiga ah ee Microsoft ee Codsiyada
DHTML Editing of Applications for Applications.
Bilowga waxay qaadataa wakhti ay ku qaadato, waxaa ugu wanaagsan in la naqshadeeyo qashinka adag oo laga bilaabo halkaas oo ay sameeyaan oo aan ka ahayn CD.
Waxaa xiiso leh in autorun loo qaabeeyey in ay ku dhex socdaan browserka, qaabka feylka: /// D: / microstation / buug aad u macquul ah. Dhanka kale rakibaadda Microstation V8i ayaa u oggolaanaya ikhtiyaarka ah in la soo saaro rakibo ama soo saaro oo lagu rakibo 282 MB oo la yiraahdo "executable" oo la yiraahdo hal mar.
laftiisa waa kiniin ka kooban hirarka oo kale. Dhamaadka rakibo, taas oo ah arrin degdeg ah caleemo yar mashiin weli la isticmaalo, oo aad kadhawaajin karto saaxir hawlgelinta iyo ruqsadaha isla markiiba haddii aad leedahay mid ka mid ah laysanka XM shaqeysiin aqoonsan furaha.
Marka hore fiiri
Halkaan ka dib ayaan kuu sheegi doonaa sida aan u sameynayo ciyaaraha cusub ...
talada, sida had iyo jeer, isku mid ah oo isku mid ah oo aan dib-u-baran, inkastoo ay hadda ku jiraan isku-xidhka ugu sareeya ee menu-ka kaas oo hore horay usoo qaatay laba tallaabo, sida UCS, unugyada, mudnaanta, Lankan oo halkaas waxaad ka eegi kartaa sida loo habaysan guddi dhanka qalabka waxaa xoogaa sheeko ... mmm ... Waxaan arkay ka hor inta ... waxa ay u muuqataa ...?
Bentley Systems My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous Naqshadaynta dhirta qoraxda leh ee AutoCAD madaniga 3D
Post Next GIS Manifold oo abuuraya layliyo daabacanNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Microstation V8i, shuruudaha"
Waxay u egtahay mid xiiso leh Microstation V8i waa barnaamij aad u wanaagsan Cadastre